Izingane njalo abathanda ukuthola ucingo oluvela abazali, uma ukuqeqeshwa angajwayelekile. Nezimfumbe mayelana amahlosi uzongithanda izingane kanye nentshisekelo imvuthu zanoma iyiphi iminyaka. Ngakho-ke kufanele ukulungiselela ngokucophelela ukuze kuqale inqubo yokufunda umdlalo.
Nezimfumbe mayelana amahlosi evesini
Uma une amakhono ukwengeza imilolotelo, ungakwazi beveza puzzle lakho siqu mayelana ikati elikhulu enganeni yakho. Uma kungenjalo, ungathola ulwazi lapha:
Kodwa ngezinye izikhathi ukugwavuma kancane.
Mhlawumbe ekhaya une ikati?
Futhi iyini umzalwane umthambo esilwaneni ezimthende okungukuthi?
Nimble futhi esheshayo, futhi enhle kakhulu,
Tabby, ubani guys?
Njengoba ukubhonga, ngakho kubi kakhulu,
Fangs kanye claws esiyingozi yayo.
Zenza e esekisini.
Kodwa kancane ngaphezulu.
Awu, nje uthanda amazinyane.
Futhi ukhule njengoba zarychat.
cat ezimthende, ngingakubona kanjani nje kancane esongelayo.
Ngo-zoo wena ayebone kubo, nje uwambambatha ayizange.
Lesi silwane emgwaqweni ayikwazi ukutholwa,
Ingabe ehlathini bembone.
Ikati uhlala esekisini, e-zoo,
Kodwa unhlangothi wakhe ngeke ube njengensimu epaki.
Ezimthende, Fluffy, enhle, ngezinye izikhathi ngisho ukudlala.
Kodwa kubalulekile ukuzwa igwavuma yakhe, wenza kanjalo uyokuqonda ngesikhathi esisodwa ukuthi ikati ngeke kukusize ngalutho kuso.
Ubani ezimthende ukuphendula izingane othandekayo?
pussycat Big, ezimthende.
Wayengeyena wesabe lutho impungushe noma ihhashi.
Growls menacingly, Amazinyo ibukhali,
Futhi ngakho, okwekati,
Riddle mayelana ihlosi izingane temibhalo yephrozi netindzaba
Uma ufuna ukufaka ulwazi oluthe xaxa kulezi imisebenzi, ungakwazi ukubafundisa temibhalo yephrozi. Ayegcwele imfihlakalo mayelana ihlosi ngoba, futhi izingane bayojabulela, futhi guys amadala.
Le cat ezimthende, yena uthanda bonke guys. Growls very scary, kuyingozi. Kuphela isekisi noma zoo ungajabulela lezi zilwane.
Kungaba e kwezamahlaya lithambe ukubona abaqeqeshi kungaba amabombo ngisho wagxila emlonyeni ikati. Kodwa ekhaya evela komunye ke ayikwazi ukutholwa, ngoba nomzingeli yangempela. Ezimthende, okwekati, kodwa emikhulu kakhulu. Ubani lo?
Eyiqiniso nezimfumbe mayelana amahlosi ukusiza ngangokunokwenzeka ukuba idlulisele ukwaziswa ukuthi kuyadingeka ukuze izingane ukuyichaza ilungelo.
Kukhona yini okunye ukuqeqeshwa okuwusizo nge nezimfumbe
puzzle ezicacile kanye ethakazelisayo amahlosi ezisiza ekuboneni amathalenta imvuthu. Endaweni yokuqala kuyasiza ukuthuthukisa ingane ngokugcwele, kodwa ngokuyinhloko kuthinta lezi zinto ezilandelayo:
Ikhono afinyelele imigomo.
Isithakazelo ekufundzeni kahle ingane uzokuqonda ukuthi ukufunda izinto ezintsha esijabulisayo kodwa futhi ezithakazelisayo.
Winter fun for izingane kanye nabantu abadala
Amanyuvesi Okuhamba phambili kwe-Penza: Ukubuyekeza